Adappt dia mamela anao hampiasa fehy vaovao amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Adappt, raha heverinao fa lafo loatra ny tadin'ny Apple Watch
Mbola kely ny sisa hanaovana famandrihana ho an'ny Apple Watch any amin'ny firenena 9 ka rehefa afaka izany, amin'ny 24 aprily, ny tompony dia afaka mahita azy ireo ao amin'ny Apple Store raha naneho hevitra izahay tamin'ny lahatsoratra teo aloha. Ny zava-misy dia raha vantany vao mijery ny vidiny napetrak'i Apple ianao maodely isan-karazany amin'ny Apple Watch mety nahatsikaritra ianao fa misy maodely izay ny strap dia mety manana lanjany mahery mihoatra ny telonjato hetsy.
Ity toe-javatra ity dia efa hitan'ny mpanamboatra maro sy Izany no antony nanombohan'izy ireo hamorona ilay tetikasa izay tianay haseho anao anio, izay nantsoin'izy ireo hoe Adappt.
Mazava fa ny olan'ny fehy dia zavatra iray izay hitondra ny rambony ary izany dia ny vidiny izay napetrak'i Apple dia tsy ara-drariny tanteraka, satria amin'ny maodely toy ny vy mainty dia afaka mahatratra ny vidin'ny tadiny efa ho 500 isika euro. Tady vy tsotra izay mitentina betsaka kokoa noho ny milina maodely Sport.
Efa maro ny mpanamboatra mitady famatsiam-bola. Iray amin'ireo voalohany nandefa ny Ny fangatahana famatsiam-bola ao amin'ny Kickstarter dia mpanamboatra Clicks, adaptatera fatorana tena mitovy amin'ilay hasehontsika anao anio.
Amin'ity tranga ity, ny maodely adaptatera tadiavina izay tianay haseho anao dia antsoina hoe Adappt ary tadiavina famatsiam-bola ao Indiegogo. Amin'ny alàlan'ity adapter ity dia afaka mampiasa karazana tadiny amin'ny Apple Watch ianao ary koa, manana ny azo antoka fa ny adaptatera dia mihaza tsara amin'ny faran'ny farany amin'ny maodelin'ny Apple Watch anao.
Ity adaptatera ity dia ho misy amin'ny habe roa, ho an'ny maodely Apple Watch 38 sy 42 mm ary amin'ny famaranana telo samihafa. Ho setrin'izany, ny tsirairay avy amin'ny famaranana dia samy hanana loko roa samy hafa, mba hananantsika famaranana vita amin'ny alimina volondavenona sy volondavenona ho an'ny maodely Sport, vita amin'ny vy voadio, na amin'ny endrika fitaratra na amin'ny loko mainty, afaka ampiasao izy ireo miaraka amin'ny maodely Apple Watch ary farany ny maodely ho an'ny Apple Watch Edition fa vita amin'ny vy misy lokony volamena mavo na raozy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Adappt, raha heverinao fa lafo loatra ny tadin'ny Apple Watch
Ny motherboard an'ny MacBook 12 "vaovao dia kely kokoa noho ny Raspberry Pi
Tadidio ny 3D Dock avy amin'ny rafitra talohan'ny Yosemite?